FROM PLENTY TO POVERTY: ‘Garaacha Uffachuu?’ in Oromo Culture -
Fayyeeraa N. Sobbooqsaa
4 Responses to FROM PLENTY TO POVERTY: ‘Garaacha Uffachuu?’ in Oromo Culture
Jimma February 13, 2017 at 8:19 am #
Baga kana nu barresite. Barumsa guddaa nu kenna. Bubuluun kuni egaa gaaridha. Bubulan malee homaa hin argani. Jireenya kessatti akkaataa hojjataniifi akkatti yaadan hiyyummaa kessaa nama baasa hiyyummaa kessattis nama hambisa. Kaleessa qabeenya qaba ummatni kuni. Hin hiyooma akka dhunfaatis akka biyyaattis. Maaltu ummata kanatti dubbi itti xaxe. Hedduudha. Bu’aa ba’i irraa barachun barbaachisaadha. Yeroo heddu barrun argu akkaataa ummatni kuni cabe fi gochaa halagaafi motumoota biroo kaasna. Motumoota komannu irra caala amala wal irratti hojjanettu asin gahe. Garii keenya dhoksaan diina walin “network” qabna. Xiqqaatu namoota biyya kessa diinaaf tajaajilan walin “network qabna. Kuni dhaaba tokko kessa tesse hojjachu irratti dhibbaa guddaa qaba. Kan biraa mee ummatni gamtaan ka’eera. Deebi’e rakkate. Maalifi?. Qabsoo kana duuba kan jiru gareen laakkofsa hinqabu dhugaa dubabchuf. Garu tokko ka’e anatu duuba jira jedha. Waanti yartuu akaknaa kuni dhaabachu qaba. Namoota “convention” qophessanis akkaataa hojjatan madaalu. Namoota qabsoo kessatti hirmaatan muraasa waamani hin ta’u. Gruppii biraa akka jabaatu karaa bana. Namooti adeemsa “convention” irratti barru qophesitanis inuma dubbisna.
Ummata kessa kanan tures xiqqaadha. Waggaa tokko hin guunne. Amala heddu arga ummata kessatti. Ishee fafe kaan hin kaasu. Qabsoo kana eegaa hojjanne dhalotatti dabarsina kan jedhanis jiru. Hojjaan garu ofmaaf hojjachunis jira. Waanti yartu midhaa isheen feddu xiqqqaa miti. “Trust” umuu irratti dhibbaa qabdi. Ummata tokko kessattis “shrewdness & selfish interest” jiran ballessu hin dandenyu. Akkaataa qabsoo hinmineetti kaawu male. Abbaaan fedhe dhaloota ta’e kan umuriin bubulan “responsibility” itti kenamu yoo hojjatedha. Hundu walitti dhufe-xinnaa guddaa-kan dhimmi ilaalatu-kan fedhi qabu dhoksaan osoo hin ta’in fulduratti bahe gamtaan yoo hojjatanidha. Ummatni kessaa yaa filatu. Maqaa wal xurressu nama xiqqessu bukkeen kaachun oromoof miti. Kan barbaadamu yaada ummata sochoosu qabsoo ummata tarkaanfachisu fuldura kaa’udha. “Recognize and respect” yaa goonu. Dhaaboota garee/gruppii fi “interest” heddu jiraachus. Motumoota biyyatti bulchaa turanifi motumoota faranjii komachun gahaa miti Oromiyaan hiyyummaa kessa jiraachu isheetif.
Bariisoo February 13, 2017 at 9:06 am #
It is Very interesing naration and analysis .Garracha uffachu is Kiila liixuu in south-east ,south Oromia.
MOTI February 13, 2017 at 5:00 pm #
IT HAS A GOLDEN PLACE IN THE HUNDREDTH OF THOSANDS PAGES OF OUR HISTORIC SURVIVAL-EXISTANCE HERITAGE….I AM REALLY EXCITED OF TAPPING INTO AT LEAST FIVE GENERATION…..U AND WHO COLLABORATED WITH YOU DESERVE HEARTLY THANKS…..IT HELPS US TO FIND FACTUAL CAUSES..REAL BACKGROUNDS BOTH TO STRENGTHEN AND AMALGAMATED VARIOUS RESOURCES NECESSARY TO PACE FORWARD THE JUST AND LEGITIMATE STRUGGLE…..PARALLEL CONTRIBUTIONS ALSO SIGNIFICANTLY HELP TO INCREASE THE AWARENESS AND WIN THE MINDS AND HEARTS OF INTERNATIONAL BODIES BESIDES HELPING TO PROVIDE ACCESS TO THOSE SIMILARLY SUFFERING YET LACK THE ACCESS……..KEEP IT UP….SPECIALLY TO STAND FOR JUSTICE AND COMPREHENSIVE FREEDOM OF ALL THE OPPERSSED PEOPLE LIKE. YOU DOING FOR YOUR PEOPLE…..GOD BLESS YOU …….
MOTI February 13, 2017 at 5:37 pm #
Paul said TO Timothy…victory is for those WHO fight the rightous &just fight,not for those WHO compromise, …WITH the power of opperession….I have SEEN in your narration the flow of information AND critical observations which have led them TO properly understand , own AND use the output TO conceive AND give birth TO a WELL accepted,longtimed,AND organized determinations TO start the resistance AND emancipation straggle FROM their doorstep,without procrastination AND compromising …in continuity…TO reach AND appropriately empower,initiate AND march generations TO COME through the available and effective ways of communication…..their efforts have played a GREAT role TO associate WITH AND realize the undeniable victories WE at this point in historical,political,technological,..timeline are reaping AND using IT for furthering AND More FRAMING WHAT THEY HAVE STARTED REACH AT MORE HIGHER AND WELL FOUNDED LEVEL …..SO LET US COMMIT RESOURCES TO THE FULFILMENT AND CRIMINALIZATION OF NATION,GENERATION,…REGIONAL AND GLOBAL ATTITUDE AND BEHAVIOUR RESILIENT TO DENIAL AND ABUSE OF JUSTICES OF ALL KINDS FOR ALL HUM!NITY……IT WOULD BE HELPFUL AND IMPORTANT TO ENCOURAGE THIS TYPE OF ACTUAL AND FACTUAL DOCUMENTATION AND SHARING FOR A WIDER AND FUNDAMENTAL CHANGES…..NECESSARY TO CURE THE HUMAN MANIFACTURED IMPLANTED AND NURTURED MULTIPLE HUMAN AND ENVIRONMENTAL DISEASES…GOD BLESS THOSE WHO HANDED DOWN THE STORY AND RESPONSIBILITY ..